Hobiana – Haisoratra ankehitriny :”Sady mahasoa no manapoizina ny facebook” | NewsMada
Hobiana – Haisoratra ankehitriny :”Sady mahasoa no manapoizina ny facebook”
Maro ny mpanoratra no manana talenta kanefa tsy nandranto fianarana momba ny literatiora…. Anisan’izany i Hobiana izay naneho ny heviny momba ny haisoratra sy ny facebook…
“Tsy vitan’ny aingam-panahy sy talenta fotsiny ny asa soratra kanto fa ilaina ny fandalinana. Maro no mangetaheta izany nefa tsy mahita boky na mahita zoky mba hifanakalozana hevitra. Ka moa tsy adidin’izay zoky efa nandia lalan-davitra ve ny mandavorary ny ezaka sy fikirizan’ireny tanora misandratra manana talenta sy otri-javakanto ireny? Eny no valiny satria hasambarana ny mamaky asa soratra maharesy lahatra ny hakantony”, hoy i Hobiana.
Tsy takona afenina ihany koa anefa ny firoboroboan’ny teknolojia. Mahazo vahana ny fitaovan-tserasera, ankehitriny. Mivoatra isan’andro ny tolotra homen’ny mpamokatra ireo mpanjifa. Roboka ao anatin’izany ny ankamaroan’ny mpanoratra, indrindra fa ny tanora maneho ny sanganasany, na ny talenta ananany. Nanjary lasa filana tsy azo ialana eo amin’ny fiainany ny fampiasana ny “facebook”.
Saba-droa lela ilaina fitandremana fatratra
“Nampiroborobo ny firo­tsahan’ny tanora eo amin’ny se­hatry ny haisoratra ny fiparitahan’ny teknolojiam-pifandraisana ho tonga eny an-tanan’ny tsirairay, tato anatin’ny folo taona farany. Saba­tra roa lela ihany izy io : sady ma­hasoa no manapoizina. Maro ny aretina mifindra amin’ny facebook ka mamparofirofy ny asa soratra sasany. Inona moa no fanefitra fa tsy ny takalo sy fivelarana ihany”, hoy hatrany i Hobiana, nanazava ny fahitany ny tontolon’ny teknolojia sy ny akony eo amin’ny mpanoratra, amin’izao.
Tsy afa-miala amin’ny teknolojia ny mpanoratra, ankehitriny fa mila mahay mandanjalanja mba tsy hihinana am-bolony ka hiafarana any amin’ny fanapoizinan-tena.